Rating: SKU: 797-63-7. Categories: Nwanyi eji, Mmekọahụ Mmebi Hormones
Isi usoro nke Levonorgestrel raw ntụ ntụ dị ka progestogen-naanị ọgwụ mgbochi ọgwụ mgbochi mberede, dị ka International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) si kwuo, iji gbochie njikọta spam site na igbochi ịmịkọrọ nwa na ịmịkọrọ ụbụrụ. FIGO kwuru na: “ nyochaa ihe akaebe na-egosi na LNG [levonorgestreol] ECPs enweghị ike igbochi ịkụbanye akwa nke akwa. Asụsụ na ịkụbanye ekwesịghị ịgụnye na LNG ECP ngwaahịa labeelu. ” Na Nọvemba 2013, European Medicines Agency (EMA) kwadoro mgbanwe na aha ahụ na-ekwu na ọ nweghị ike igbochi ịkụbanye akwa àkwá. Ndị ọzọ ọmụmụ ka na-ahụ na-egosi na-edoghị. Ọ bụ ezie na o yighị ka mgbochi ọrịa mberede na-emetụta ịkụnye ya ọ gaghị ekwe omume iwepu ohere niile nke nsonaazụ njikọta spam. Na Nọvemba 2013, EMA kwadoro mgbanwe maka aha HRA Pharma's NorLevo na-ekwu, sị: “N’ule ndị a na-eme n’ụlọ ọgwụ, a na-ebelata nrụrụ aka na-egbochi afọ ime n’ihe banyere ụmụ nwanyị ndị dị kilogram 75 n’arọ ma ọ bụ karịa, ntụ ntụ Levonorgestrel adịghịkwa arụ ọrụ n’ime ụmụ nwanyị tụrụ atụ ihe karịrị kilogram 165. ”N’ọnwa Nọvemba 80 na Jenụwarị 2013, FDA na EMA kwuru na ha na-elele ma ịdị arọ ya na ogo ya na-ebuwanye ibu (BMI) na-ebelata nrụrụ aka nke ọgwụ mgbochi mberede.
Levonorgestrel raw ntụ ntụ bụ otu ihe na ọgwụ ọgwụ niile, ụfọdụ mmetụta ndị a na-achọghị nwere ike ịda site na iji Levonorgestrel ntụ ntụ. Mgbe ọ bụla gakwuru dọkịta ma ọ bụ ọkachamara nlekọta ahụ ike maka ndụmọdụ ahụike tupu ojiji. Mmetụta dịkarịsịrị nke na-ewere 1.5 mg Levonorgestrel raw ntụ ntụ na ọnwụnwa ahụike (nke 10% ma ọ bụ karịa gosipụtara) gụnyere: ọgbụgbọ, hives, dizziness, isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ịda mbà n'obi, acne, uru dị arọ, wedata HDL, mgbu afọ, ara ara. mgbe ị gachara ozi, mgbu nke akpanwa, igbu oge ịhụ nsọ, nsọ nsọ, ọbara ọgbụgba, na ike ọgwụgwụ, amenorrhea. Achọghị imeju na akụrụ, a kwụgidere ara mmadụ .; mmetụta ndị na-ahụkarị (nke 1% ruo 10% kọrọ) gụnyere afọ ọsịsa, agbọ agbọ, na ịhụ nsọ mgbu; Mmetụta ndị a na-apụkarị n'ime awa 48, ọ gaghị enwe ike iji ọgwụ mgbochi ọmụmụ oge niile, ka ewere usoro ọgwụgwọ mgbochi ọzọ a pụrụ ịdabere na ya. Womenmụ nwanyị ndị na-ese anwụrụ ekwesịghị ị (ụ (n'ihi mgbagwoju anya nke ọrịa obi).